Bromley, Lewisham & Greenwich Uche | ọrụ ọgụgụ isi & ọrụ mgbaka
Ahụike uche na ụlọ akwụkwọ sekọndrị
Mmemme Minds Up ọhụrụ anyị na-enyere ụmụ akwụkwọ sekọndrị aka ịchịkwa ahụike uche ha.
Ihe ngosi mmịfe ọzụzụ ahụike uche
Ọzụzụ ahụike uche anyị zuru oke bụ ụzọ dị ọnụ ala iji kwalite ọdịmma uche na nzukọ gị na n'ụlọ.
ntinye akwụkwọ ugbu a
Site na ime ime, ọmụmụ na gafere, otu Mindful Mums na-emeri anyị nọ ebe a maka gị. June - Julaị nkuzi ntinye akwụkwọ ugbu a.
Enyi nke BLG Mind slide
Bụrụ enyi nke BLG Mind. Ọ bụ n'efu iji sonye, ​​na ọnụ anyị nwere ike wulite obodo siri ike na ahụike.
Nkwado Ahụike Uche
Anyị nọ ebe a maka onye ọ bụla na-alụso ahụike ọgụgụ isi ha ọgụ, ma ọ bụ na-akwado onye dị. Anyị na-enyere ndị mmadụ aka na mgbake ha, na-enyere ha aka ịchịkwa ahụike ha ma na-eduga ndụ mezuru, ndụ na-arụpụta.
Anyị na ndị mmadụ nwere mgbaka, ezinụlọ ha na ndị nlekọta ha na-arụkọ ọrụ iji nye nlekọta otu otu, nduzi ọkachamara na ihe ngwọta bara uru iji nyere ha aka ịnọgide na-enwe nnwere onwe na ndụ.
Otu akpụkpọ ụkwụ gbawara agbawa na akpụkpọ ụkwụ akwụsịghị akwụsị otu egwu na-atụ si Wincanton ịga kilomita 14 iji nweta ego maka ọrụ anyị.
Ihe omume Ultra Challenge bụ ụzọ dị egwu iji kwagide onwe gị ruo oke mgbe ị na-enweta ego maka ọrụ anyị dị mkpa. Debanye aha maka ịma aka South Coast nke Septemba a.
Ọzụzụ ahụike anyị na-enyere ndị otu aka mepụta gburugburu ebe ndị mmadụ na-enwe ahụ iru ala ma mara nke ọma gbasara nsogbu ahụike ọgụgụ isi.
Ndị otu anyị na-emeri Mindcare Dementia Skills team nwere ihe karịrị afọ iri abụọ na ise nke nkwado na ọzụzụ ndị ọkachamara, ndị nlekọta na ndị ezinụlọ na nlekọta mgbaka.
mkpali inye ego
Gị ma ọ bụ ndị otu gị na-anakọta ego chọrọ nkwalite mkpali? Anyị enweela ọtụtụ ndụmọdụ inye ego, mkpali na ndụmọdụ iji nyere gị aka n'ụzọ gị.
Nwee mmụọ nsọ
Hapụ onyinye na uche gị
Anyị na-agbanwe ndụ ime obodo na Bromley, Lewisham na Greenwich ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 70. Onyinye ihe nketa na-efu gị ihe ọ bụla ugbu a, mana ọ nwere ike ịpụtara anyị nnukwu ihe n'ọdịnihu.
Bụrụ onye ọrụ ụlọ ọrụ
Bụrụ onye mmekọ BLG Mind wee nyere anyị aka ịgbanwe ndụ ndị obodo nwere nsogbu ahụike uche na mgbaka. Chọpụta uru dị n'imekọrịta anyị.
Gburugburu BLG Mind
Ịbụ papa na-amalite na Lewisham
Otu ọhụrụ anyị Lewisham Being Dad ewepụtala. Usoro ọmụmụ izu ise na-achọ inyere ndị nna ọhụrụ aka ime mgbanwe n'ịbụ nne na nna na jikọọ na ndị nna obodo ndị ọzọ.
Na BLG Mind, anyị ji nsonye akpọrọ. Chọpụta usoro kachasị ọhụrụ anyị na-eme iji hụ na nsonye bụ akụkụ nke akwa nke nzukọ anyị.
N'ime usoro mbụ nke usoro ọhụrụ anyị na-egosi ọrụ nke ọrụ anyị, na-amalite site na otu ndị na-eme ihe na-eme ka ndị ntorobịa 'na-agbanwe ndụ''.